स्वर्ण दाबेदार तुलसा साग छोडर दुबई पुलिसमा भर्ति हुन कतार पुगिन ! – Life Nepali
स्वर्ण दाबेदार तुलसा साग छोडर दुबई पुलिसमा भर्ति हुन कतार पुगिन !
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत स्वर्ण पदकको दाबेदार खेलाडी तुलसा खत्री रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएकी छिन्। सागको बन्द प्रशिक्षणबाट खत्री कतार पुगेकी हुन्। “देशका लागि खेल्ने चाहना हुँदाहुँदै म झुट बोल्न बाध्य भएँ। मेरो जीवन सहज पार्न कतार हिडें” कतार जानु अघि तुलसाले प्रशिक्षक चन्द्रबहादुर गुरुङलाई सन्देस पठाएकी थिईन्। आर्मीको प्रतिनिधित्व गर्दै आठौँ राष्ट्रिय खेकुदमा ४ सय मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जितेकी तुलसाले त्यस क्रममा ५९.५६ सेकेन्डमा दुरी पार गर्दै राष्ट्रिय रेकर्ड कायम गरेकी थिईन्।
यो पटक सागमा खत्री ४ सय मिटर र ४ सय मिटर हर्डल्समा सहभागी हुँदै थिईन्। उनि ब’न्द प्रशिक्षणबाट निस्कनु अघि घरमा पुजा भएको ब’हाना गर्दै पुजाको थालीसहित बाहिर निस्किएको बताईएको छ। नागरिकन्युजलाई प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङले बताए अनुसार तुलसा दुबई पुलिसमा भर्ति हुन कतार पुगेको जानकारी रहेको छ। तुलसाले गत महिना चिनमा सम्पन्न विश्व सैनिक विन्टर ओलम्पिकमा ४ सय मिटर दौडमा ५९.५७ सेकेन्डमा पुरा गर्दै नयाँ राष्ट्रिय किर्तिमान कायम गरेकी थिईन्।
नागरिकसंगको कुराकानीमा प्रशिक्षक गुरुङले तुलसाको कदम राष्ट्रको लागि धोका भएको बताएका छन् – ‘उनी दुबइ पुलिसमा भर्ती हुन कतार गएको भन्ने जानकारी आएको छ। उनीबाट सागमा पदकको अपेक्षा गरिएको थियो। तर अन्तिम समयमा उनीबाट धोका भएको छ।यो समग्र राज्यका लागि नै धोका हो।’ तुलसा कतार पुगेपछि अब उनको सट्टा अर्को खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछिन्। तुलसाले गत महिना मात्रै चिनमा सम्पन्न विश्व सैनिक विन्टर ओलम्पिकमा ४ सय मिटर दौडमा ५९.५७ सेकेन्डमा पुरा गर्दै नयाँ राष्ट्रिय किर्तिमान कायम गरेकी थिईन्।
यस्तै अर्की तुलसा श्रेष्ठ पनि दोस्रो बन्द प्रशिक्षणकै क्रममा विना कुनै जानकारी वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको मुख्य प्रशिक्षक गुरुङले बताए। तुलसा श्रेष्ठ पनि ४ सय मिटरका सहभागिता जनाउन बन्द प्रशिक्षण रहेकी थिइन। उनले पनि ४ सय मिटरमा सहभागिताका लागि अभ्यास गरेकी थिइन्। उनले दोस्रो बन्द प्रशिक्षण पछि सम्पर्क विहिन बनेकी थिइन्। खत्री र श्रेष्ठ दुबै विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबका धावक हुन। सहभागि भएकी खेलाडी खत्रीले अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई निस्कृय बनाउँदै सम्पर्क बिहिन बनेकी छिन।
Previous टी १० लिग क्रिकेटमा सन्दीप आ’वद्ध टिम प’राजित
Next मा’ल्दिभ्सलाई ह’राउँदै भारत महिला भलिबलको फा’इनलमा